अपार्टमेंट मा धूलो को कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न, हावा निस्पंदन
आज हामी धूलो हटाउनेछ अपार्टमेंट मा, साथै घरमा हावा सफा राख्न कसरी रूपमा प्राप्त गर्न कसरी सिक्न छौँ।
हामी तपाईंलाई कहिल्यै हामी के सास फेर्न छक्क परे हुनुहुन्छ, र मानव शरीर मा एक हानिकारक प्रभाव धूलो रूपमा यस्तो कारक हो। कुनै कुरा हामी कसरी हाम्रो घर सफा गर्न प्रयास, धूलो फेरि accumulates। त्यसैले त्यहाँ धूलो, र कसरी घर मा धूलो उन्मुक्ति छ किन कारण जान्न आवश्यक छ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्। यो जस्तै हो मानव कारक, र तपाईं यस्तो कुकुर रूपमा एक जनावर, एक छत मुनि बाँच्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई। सानो कण कुकुर कपाल, जो छैन नाङ्गो आँखा देख्न, हावा मा उडान, एउटा फूलदान छन् फूलहरू देखि पराग। आफ्नो घर किनभने gassed बलियो हावा को विन्डो खोल्न सक्नुहुन्छ जहाँ छैन मोटरबाटो, नजिकै स्थित छ निकास वाफ द्वारा? यी सबै कारक, साथै घर एक धूम्रपान व्यक्ति छ भन्ने तथ्यलाई धेरै रोगहरु पैदा हामी पनि शक सक्दैन जो को उपस्थिति को कारण। तसर्थ, धूलो सफाई पनि व्यक्तिगत स्वच्छता को लागि, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कसरी घर मा धूलो छुटकारा गर्न?
त्यहाँ फिल्टर जस्ता उपकरणहरू ती वा अन्य प्रदूषक र अशुद्धताओं देखि आफ्नो घर मा हावा शुद्ध छन्। यो सबै को पहिलो, कसरी यो कसरी प्रयोग गर्ने, यो प्रविधी काम गर्दछ बुझ्न आवश्यक छ। यो मामला मा तपाईं धूलो फिल्टर प्रयोग गर्न आवश्यक - चुरोट Butts तालिका मा खडा, कुकुर बाल टुक्राहरू ऐशट्रे, फूल पराग: तपाईं आफ्नो घर मा एक प्रमुख प्रदूषकहरुलाई कि पाउन भने।
प्रविधिलाई सफाई हावा को विकास र अप्रिय odors, सुर्ती धुवाँ, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन वा degreasing हावा को उत्सर्जन को छुटकारा रही लागि अवस्थित छ। प्रदूषक महामण्डल वा aerosol हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, चुरोट को धुवाँ एक aerosol हावा प्रदूषक र गंध, को ऐशट्रे मा चुरोट Butts देखि गठन गरिएको छ जो छ, - यो महामण्डल प्रदूषण छ।
विभिन्न odors र धूलो को पूर्ण प्राप्त छुटकारा गर्न, यो आवश्यक आफ्नो उपस्थिति को प्रकृति जान्न, त्यसपछि तपाईं सफलतापूर्वक र समस्या बिना सामना गर्न सुरु गर्न सकिन्छ।
एक स्प्रे रूपमा हावा Fresheners छन्, तर प्रयोगको बेफाइदा पनि बाहेक लाभ छ रूपमा तिनीहरूले, इच्छाएको र अपेक्षित परिणाम ल्याउन छैन: छोटो अवधि को तीव्र वाष्पीकरण।
हावा निस्पंदन। सबै दूषण कक्षाहरू देखि हावा purifiers प्रयोग गरेर निर्मूल गर्न सकिन्छ। यी फिल्टर को प्रकार को केही लागू हुन्छ। विशिष्ट प्रकार तल दिइएका।
- ELECTROSTATIC फिल्टर। ठीक धूलो र aerosol प्रदूषण, सुर्ती धुवाँ सहित, तिनीहरूले त्यहाँ एक धूम्रपान छ जहाँ कोठा, तिनीहरूले सजिलै आफ्नो कार्य सामना गर्न सकून् भनेर, शक्ति अन्तर्गत छन्।
- फिल्टर र कार्बन सोखना। तिनीहरूले गुणात्मक महामण्डल प्रदूषकहरुलाई हटाउँदै गर्दा, आफ्नो उद्देश्य सामना।
- धूलो फिल्टर। आफ्नो मुख्य कार्य तिनीहरूले एक पूर्व-सफाई प्रदूषित हावा रूपमा कार्य भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन्।
- photocatalytic फिल्टर। भाइरस विभिन्न प्रकार, कार्बन मोनोअक्साइड को गन्ध, हत्या odors र चुरोट को धुवाँ नष्ट देखि हावा हटाउन सक्ने क्षमता छ। प्रयोग गर्न सकिन्छ दुवै अस्पताल परिसर, र जहाँ बाहिर वेल्डिंग काम लगे ती मा।
र सम्झना: सफाई, नियमित धूलो हटाउने कायम राख्ने हावा फिल्टर, तपाईं समस्या धेरै छुटकारा प्राप्त। यो सजिलो छ, त्यसैले प्राप्त तपाईं हाम्रो लेख मदत गर्नेछ अपार्टमेंट मा धूलो छुटकारा।
हेर्छ Breitling Navitimer: लाभ र उत्पादन को सुविधाहरू
म एक कङगारु बच्चा वाहक किन्न चाहिन्छ?
स्कटिश पिंजरे। घटना को इतिहास। भेषमा फैशन रुझान
महिला भौं Trimmer: चयन र आवेदन
दबाइ बारेमा समीक्षा लागि प्रयोग "Azimeda" निर्देशन
Antiviral लागूपदार्थ व्यापक-स्पेक्ट्रम छन्। antiviral लागूऔषधको कार्य
Nizhny Novgorod क्षेत्र को छोडेर गाउँमा: फोटो, कारण